21 พ.ค. 2563 - 22:52 น.
ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံး လိင်အတွေ့အကြုံက အီရာနဲ့ပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း စမ်းကြည့်ချင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ပုံမှန်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အရမ်းကြမ်းတမ်းပြီး အတော်လေး နာကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ အချိန် ၅ နာရီလောက်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး နာပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
အီရာက လိင်ခံစားမှုကို အရူးအမူး စွဲလမ်းနေတဲ့သူပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့အလိုမကျမချင်း ဖြည့်ဆည်းပေးရပါတယ်။ သူ့ကို ပုံမှန် အချိန် တစ်နာရီ နှစ်နာရီလောက် ပေးရပါတယ်။
အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် တစ်ခုခု မကြိုက်တဲ့အကြောင်း ပြောမိတဲ့အခါတိုင်း၊ ကျွန်တော့်ဆန္ဒမပါဘူး ပြောတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်ကပဲ မှားနေတဲ့သူ အဖြစ် အပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတာ၊ အနိုင်ကျင့် စော်ကားခံနေရတာတွေကို ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေခဲ့ပါတော့တယ်။
ဆောင်းဦးပေါက်မှာပေါ့။ ကျွန်တော် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်အပူချိန် ၃၉ - ၄ဝ ဒီဂရီနဲ့ အဖျားတက် အိပ်ရာထဲ လဲနေတာ နှစ်ပတ်လောက်တောင် ကြာပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံး ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူမှ လာမကြည့်ကြပါဘူး။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် သဘောပေါက်လိုက်တာက ငါ့ဘဝက ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိဘူး။ အခုချိန် ငါသေသွားရင်တောင် ဘယ်သူမှ သိကြမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါ။
အီရာ အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို အော်ဟစ် ကြိမ်းမောင်းပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေ တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကွာရှင်းကြဖို့ သူ့ဘက်က စပြောလာပါတယ်။ သူတကယ် ကွာချင်တာလို့တော့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားတာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုး နောက်မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေတော့ ကွာရှင်းဖို့ ကျွန်တော် သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ "မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို ၁၀ နှစ် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တယ်"